Lafa keenyas dhabnee ijoolleen keenyas daandii irratti hafte-Qonnaan bultoota Koyyee Faccee fi Boolee Arraabsaa - | - OBN
Lafa keenyas dhabnee ijoolleen keenyas daandii irratti hafte-Qonnaan bultoota Koyyee Faccee fi Boolee Arraabsaa
OBN Gur. 28, 2011- Qonnaan bultootni ganda Koyyee Faccee fi Boolee Arraabsaa ijaarsa manneetii kondominiyeemiif jecha lafa oomishaa isaanii dhaban mana qonnaan bultootaaf dursi kennama jedhame homaa hin dhageenye jedhan.
Qonnaan bultootaaf dursi kennama jedhamu ilaalchisee odeeffannoon nutti himame tokko iyyuu hin jiru, afaan isaanii irraa waan dhageenye hin qabnu jedhan jiraataan naannoo Boolee Arraabsaa BBCtti hime.
Qonnaan bulaan kun horsiifne qotannee buluu malee haala jireenyaa kaanitti baranii jiraachuun akka isaanitti ulfaate himu.
Kana malees, har'a garuu kondominiyeemiin ijaarame mana koo cinaa waan taheef hanga irraa gadi balfa natti gatan anaafis manni tokko yoo naaf kenname kiraeeffadhee ittiin jiraachuu danda'a jedhan.
Osoo dur tahe namni tokko dhufee miiliyoona tokko siifan kenna osoo naan jedhe ani kadhattuudhaa maaliif naa kennitan jedha ture.
Har'a garuu rakkadhee waanan jiruuf daandii irra taa'ee kadhachuu irra ''sumuni iyyuu osoo naaf kennanii nan fudhadha, rakkina na fudhachiisa '' jedhan.
Obbo Baqqalaa Damissees jiraataa naannaa Aqaaqii ganda Koyyeeti. Waan kenninsa mana kondominiyeemii kana ilaalchisee homaa quba hin qabu jedhan.
Ijoolleen keenya baratanii kan hojii hin qabne, osoo argatanii ofis tahe mootummaas fayyadan gaarii ture jedhan.
OBN akka gabaasetti qonnaan bultootni hedduun mana argatu jedhame akka homaa hin argannee himaniiru.
Qonnnaan bultootni kunneenis mana lafa keenya irratti ijaarame ormaaf dabarsanii kennuun haqa dabsuudha jedhan.
Kaan ammoo hojii guyyaa hojjechaa maatii akka jiraachisaa jiran himanii ijoolleen isaanii garatti deebi'an akka dhaban himanii qaama dhimmi ilaallatu hundaa yoo gaafannes deebii guutuu hin argannee jedhan.
''Misoomaaf jennee lafa keenya dhabnee ijoollee keenya daandii irratti dhiisuun sirrii miti''
''Akkuma jara durii sanatti buqqaanee lafa kana irraa ka'uu qabnaa? Gandoota akka Qarsaa, Booraa irratti maqaa qofatu hafaa? Dhaloonni keenya tokko illee asitti hin hafuu?'' jechuun komatu.
Kantiibaa itti aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalaa Uumaa ijaarsi manneetii dandeettii qofa osoo hin taane sammuudhaanis itti yaadanii hojjechuu gaafata jedhan.
Lameen kun waliin deemuu dhabuu irraa kan ka'e namoota dhuunfaa irra miidhaan ni gaha jedhan.
Misoomni faayidaa waliinii irratti yoo hin bu'uureffamne tokko fayyadamee tokko miidhamuun waan hafu waan hin taaneef jedhan.
Keesumaayyuu qonnan bultootni misooma kanaaf jettanii ooyiruu keessan gadhiistanii goolama siyaas-dinadgee keessa seentan dhukkubbiin keessan dhukkubbii keenya tahuu akka nuuf hubattan kan jedhan Obbo Taakkalaan shoora bahattan kanaaf akkan isin kiisu jala mureen isinitti hima jedhanii ture.
Gara fuulduraattis bulchiinsa misooma mannenii waliin tahuun qonnaan bultootni misooma lafaa irraa fayyadamoo akka tahan gochuuf ni hojjenna jedhan.
Manneen kaleessa namoota kuma 51 oliif dabarfaman jedhaman keessaa 5% fayya beeloof,20% hojjettota mootummaaf, 30% ammoo dubartootaaf dursi kan kenname ture.
Haa tahu malee qonnaan bultootaaf carraa malee ni kennamaaf kan jedhu ilaalchisee hammam akka tahe waanti ibsame hin jiru.
Naannawaa Finfinnee dabalatee magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeefamuu akka jalqabe himamaa jira.
Dhimmi master pilaanii magaalaa Finfinnee waggoota muraasa darban keessa fincilli guddaan naannoo Oromiyaatti akka ka'an kannen taasisan keessaa tokko tahuun isaa ni yaadatama.
Yeroo sana Obbo Taakalaa Uumaas haalicha balaaleffataa kan turan yoo tahu fincilaa fi haaromsa akka biyyaatti dhufeen gara muudamichaatti akka dhufanis ni beekama.
Yeroo ammaatti bal'inni lafa magaala Finfinnee hektaara 52,000 akka ta'e himama.
Dhimma kana ilaalchisuun mootummaan Naannoo Oromiyaa as bahee wanti dubbate hinjiru.
Nutis dhimmicha hordofaa jirra. Akkuma arganneen isin biraan geenya.
647 Views 3/7/19